1628s &quot;LIFT-OFF&quot; | TOKO FANAO? fanadihadiana images and subtitles
Talohan'ny nanombohan'ity horonantsary ity dia nanomboka ny tetikasa izy ireo taoriana kelin'ny 2018 World Tour. Rehefa niroso soa aman-tsara ny fizahantany dia nanomboka nahazo aingam-panahy avy tamin'ny tetikasa vaovao ny DPR. -Rosiana mila drafitra tsy tambo isaina, fifantohana, fiaraha-miasa sy ny finiavana. Ity horonantsary ity dia "MOA IZANY ARY IZANY?" Ity horonantsary ity dia nalaina telo volana talohan'ny famoahana azy ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa iray manontolo. Ny seho ao amin'ity fanadihadiana ity dia mampiseho ny fizotran'ny asa isan'andro amin'ny ambaratonga farany amin'ny tetikasa. -Ny horonantsary fandraketana an-tsoratra, fivoriana video, resaka mifampiresaka. Ahitana ny lafin-javatra tsy mahazatra sy matotra DPR, marika fialamboly mahaleo tena ary vondrona sakaiza manana nofinofin'izy ireo manokana. DPR IAN: Manahoana? Manao ahoana ianao? Um ... Ka ... Raha zohina dia nieritreritra aho hoe hanao ahoana ny an'i John mba handrakitra ny fizotran'ity album ity ... Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Eh ... noheveriko ho mangatsiatsiaka ihany. Mba hampisehoana ny olona ny zavatra mihetsika ao ambadiky ny sehatra. Araka ny fantatrao, izay tsy nasehon'ny DPR. Ary mampiseho antsika ny habetsahan'ny azontsika niditra tao. Eny, lazao amiko ny hevitrao. Eny ary, tsara daholo… Salama. 3 volana mialoha ny famoahana rakikira DPR LIVE: Eny, rehefa mandre izany ny olona dia hahatsapa zavatra iray. IAN: Ie. FIAINANA: Manantena aho fa ho gaga amin'ny tsy ampoizina ianao. Raha mihaino ity hira ity ianao. Avy amin'ny "HIA EFA TSY HITA" ka "GERONIMO" LIVE: Henoko fotsiny hoe, "Oh, tsy izany no nantenako." IAN: Ie, eny. FIAINANA: "Fa maninona no hifindra ianao?" DPR REM: mitohy fotsiny. Mampihena ny feo fiaramanidina Raha manelingelina fiantraikany hafa na feon-javatra eo anelanelan'ny ianao LIVE: * Effect Sound * ny Mayday ZAVA-TENA: toa tsy misy dikany izany. Amin'izay, tsy mila misafidy ny fomba mazava ianao. Ary voajanahary azonao afindra amin'ny manaraka. Ka na dia mijery azy ankehitriny aza isika, rehefa miaraka isika, Na, toy ny bitika kely "hyper loop" Misy fotoana izay anaovanao zavatra toy ny "zoom" toy ny Star Wars. Raha afaka ataonao fihodinana kely ireo LED ireo IAN: Jereo avy ao ivoho ary jereo avy eo aloha Mieritreritra aho fa mahafinaritra raha iny no nivoitra kely kokoa. Izany fotsiny ny filako. Zavatra iray ... tsara tarehy be ny metaly. Ka manana ny efitrano farany ianao. Noho izany, i Davin dia hijoro eo anoloan'ilay fakantsary. Ary hoy ianao: “Aza maka olona maditra. Ataovy hatrany izao, mba hahafahako manao ahy. ” Ary misokatra ny varavarana ary mitsambikina ianao. ZAVA-POANA: Tonga ve ny tifitra "NEON" iray? IAN: Eny, hitifitra azy io indray mandeha aho. Azonao atao avokoa ny miaraka aminy ... Hainao, afaka manao zavatra maro ianao ... Mety ho zavatra tokony hieritreretako izany. ZAVA-TENA: Avy eo Mihodina ny ... Sahala amin'izany Ahoana no handraisana azy io izao Ny maha-zava-dehibe ny fandresenao eto dia zava-dehibe. Ao amin'ity andiany ity. AZONAO: Nahazo drafitra CD fonosana tena tsara aho. IAN: Oh? Efa niverenanao azy ve io? Fehiny: nataoko taminay (mpanakanto endrika CD). Famonosana habaka IAN: Eh milay. Amin'ny ambaratonga manaraka. TSARA: Tsy ity ve ny ambaratonga manaraka? IAN: Tsy nieritreritra an'izany aho. TSINY: Fantatrao ve ny mahasalama an'io? TSARA: Andao hihaino tsirairay isika. CREAM: Mila mikitika ny lamosina ianao. FIAINANA: Eny, tsy maintsy mahatsapa fahatsapana «milomano» ianao amin'ny fitarihana azy. ZAVA-FOTANA: Ny lojika Hanao video roa na roa ve ianao Hanampy anao bebe kokoa ve ... Izany no izy ... LIVE: Eny, eny ... mampalahelo ihany izany Izany fotsiny, ny zavatra rehetra noeritreretinay ... IAN: Marina, marina. FIAINANA: Tsy mino aho fa ho fantatry ny olona eto amin'izao tontolo izao. IAN: Voabahana izao aho izao. Sarotra loatra izany ... Misy zavatra sarotra kokoa. Izay hataontsika ankehitriny dia ny fampiasana ireo singa ananantsika Azoko sary an-tsaina tsara ny tantara. Raha tokony ho izy kosa, raha ny lalana halehanay Hiova ny lalana arahin'izay tohizantsika ankehitriny. Izany no antony nahafoizanay izany, ity, ireto Betsaka loatra ny olana. TSARA: Fafa hafa noho ny nanantena aho. Tsy tapitra ny fotoana nandehan'i Davin Tany Roma, ny endrika napetraka dia hafa noho ny nieritreretiko. Just ... ny zava-drehetra ... na dia ny fitafiana. Nanao izay fara herinay izahay, saingy tsy natao izany. Tsy tokony ho sasatra ianao eto. Izaho fotsiny dia… mila mahay miaina indray. LIVE: Mahamenatra? IAN: Tsia, tsara izany talohan'izay. Saingy tsy fantatro ny antony nanovako an'izany. Ny antony iray mahatonga izany somary hafahafa ihany dia noho ny tononkira. "Uh, mahazo ny kofehy, mahazo lows" Noho izany, ny CREAM dia hanao izany bebe kokoa. Tsara izany feo izany, nokapohina Ho voajanahary amin'ny ampahany amin'ny piano. CREAM: Andao aloha hanao zavatra voalohany. LIVE: Ataovy fotsiny, aloha. LIVE: Lova Afaka mitafy an'io fotsiny ianao. Amin'ny feo mahery Ah, azafady! IAN: Eny, kely kokoa izany Tsy maintsy mahatsapa ianao. 2 volana mialoha ny famoahana rakikira Fehiny: Orange Eunbyeol (stylist): volomboasary ve izany? Tsy mbola nataoko ny voasary. Tokony ho voasary izany. TSINY: tsara izany sy ny voasary Miandry, nanao ny mari-pahaizana ve izany? Black Tian'ny olona rehetra izany. Jeong Geun (stylist): tsy afaka miala amin'ny tanako aho. TSARA: Voalohany, misy masika roa ihany i Jun Yong (Stylist Ashe): Tsy mety izany Fehiny: Ahoana ny fomba fanao? Eunbyeol: Tsy ho tsara tarehy kokoa ve raha toa ka misy mason-tava eo akaikiny? Azonao ampiarahina eto ity Mila kofehy toy izany aho TSINY: fantatro ny tiako ambara. IAN: Efa nieritreritra aho, raha Raha manana bandana na bandana mainty i Dabin. Ka afakory ny sisiko. Fehiny: Azo inoana Tiako izany feo izany. Eunbyeol: Tsy maninona raha manala an'i Davin LIVE: Tapitra? Kintan'ny volafotsy: Tsara e! IAN: Ahoana no atao? Afaka mandeha ve ianao? Afaka mifindra ve ianao? LIVE: Eny, mahazo aina. IAN: Hifamatotra amin'ny kitaponao izany. LIVE: Eny. IAN: Tsy mety ihany. Na dia eo aza ny ezaka lehibe nataon'ny DPR ho an'ireo rakitsary ity, Tsy feno ny làlana marobe sy ireo demo maro tsy mbola nahavita. Rehefa manakaiky ny fe-potoana, manandrana mafy mamorona isika Nangataka fitsangatsanganana fohy i Live ary nandeha nihira tamin'ny toerana vaovao, lavitra ny tanàna. FIAINANA: Mino aho fa ho malefaka ny hiova ... People Ohatra, "Ow, Rap" CREAM: Oh, mahazo aina aho. Tsara izany LIVE: miasa mafy ... Mihinàna mahasalama! Talen'ny ekipa stunt: Raha mahazo ny fahatsapana ianao, rehefa mitifitra isika izao Mba hampifanaraka ny fikirana fakantsary Rehefa manao fanovana kely eo Mihevitra aho fa azonao atao ny manao izany. LIVE: Eny. Hitako izany. IAN: Ninja ... Ninja sokatra ... Tsara ~ FIAINANA: "mety" [Ny andro talohan'ny famoahana horonantsary] IAN: Mijere eo. Mety tsy hivoaka tao ve izany? Tsara kokoa ny hamoaka azy rehetra? Amin'ny tranga toa izany? Hmm, tsy maninona, tsy maninona e! [Andro fifampitifirana sarimihetsika] TSARA: Tokony haka izany koa aho? JunYong: Eny tokoa. Izany koa CLINE: Izaho? Nijanona kely aho rehefa nijanona teo amin'ny zaridainako. Yongwoo (Manager): Eh, nanao asa tsara ianao… CLINE: Tsy fiantsenana, tetezana ... IAN: Andao ... Andao ... Hoin (Tale): Ataovy izany ... Tany ... Ny loko fotsy ve izao? Hoin: Oh, fa ity akanjo "LEGACY" ity ve? LIVE: Oh, ity no rap rap? IAN: Ie. Hanomboka toy izao izy amin'ny voalohany. OK, eritrereto hoe "NEON" ity. Fa ny "LEGACY" dia manomboka amin'ny sehatra mitovy ihany, fa eo amin'ny Mars ianao amin'izao fotoana izao. JunYong: Vao lasa aho. Esory izany ZAVATRA: Tsy manazava izany. Mieritreritra aho fa noho ny hatsembohana. Tale Mpanampy: Tsy sempotra ve ianao? IAN: Tsy maninona izany. Mpamily drôna (Kim Min-chan) nandroaka ve ianao? Mod: mitsiky! LIVE: Eny ary. IAN: hianjera eo an-tananao io. Fantatrao ve ianao? Avy eo, rehefa lavo, dia tratranao. FIAINANA: Andao hataontsika indray mandeha indray. IAN: Te hanao azy indray mandeha ve ianao? Manohina ny bokotra ianao Ny haavony Tena mitondra azy io ianao. Yongwoo: Dabin, mila miakatra any ianao. TSARA: Andro 2 IAN: Andro 2 Cool. Toa ao amin'ny trano fijerena sarimihetsika aho. Tena io no ataontsika. Azo antoka Ny «Space Odyssey» sy ny «Star Wars» dia voataona be. Ny zavatra rehetra hitako raha nihalehibe Ankehitriny, handeha izahay… Geronimo Hetsika ... ! Miaraka amin'ny fakan-tsary eo anoloana, ohatra ... Tsy mahafinaritra ve izany? Misy zavatra toa izany. Afaka mody ho toy ny fefy ianao Miaraka amin'ny angovo ... Mahafinaritra. Handeha aho! TSINY: Izany izany, izay! Cut! Aleo ary! Izay izany! IAN: Mitsangàna ... Hijery ny lafiny aho. LIVE: Eny ary. IAN: Eny ary, izay daholo. Tapitra, rahalahy. Ie tapitra! Tale mpanampy: asa tsara! Tsara ny asanao! 1 volana mialoha ny famoahana rakikira [Mampifangaro Studio] TORO: Mila sorona ny andaniny roa. Tsy mino aho fa tokony handeha lavitra amin'ny zavakanto ihany isika. Ohatra, "Oh, tokony ahena kely kokoa ity decibel ity ..." Sahala amin'izany Eny, afaka manao izany indray mandeha aho. Saingy tsy hiverina isika. Satria rehefa mitranga izany dia mihemotra ny zava-drehetra. IAN: Fa ity ... TSINY: Raha tara isika Saingy azoko antoka fa 100 isanjato izany, 99 isan-jato ny farany. Lazao amin'ny olona izay mijery azy Tena manakaiky isika. Ary ho an'ny rehetra eo amin'ny anjara asako Ity no zavatra mampiady saina indrindra. Koa eto daholo izahay Izahay dia mifampamaha Handeha hanangona an'ity rehetra ity aho mba hahafahako mandefa ny kopia farany amin'ny fanatrarana ... Somary adin-tsaina aho izao. Director String: Manodidina ny 93 ary handika any aoriana. Mino aho fa hanao toy izany koa i Tremolo taty aoriana. Rehefa avy nandrakitra ireo tadin-dàlana misy an-dàlan'ny "KISS ME" sy ny "TSY MANGALATRA AZONY", dia nanomboka nifangaro ny ekipa, iray amin'ireo ampahany lehibe indrindra amin'ny fizotran'ny mozika. Saingy noho ny fanelingelenana sy fotoana farany, ny DPR dia tsy maintsy namorona momba ny fomba fampiasan'izy ireo ny fotoana sisa tavela. TSAROTRA: Ny fifangaroana rehetra nalefako (Engine Engineer) ary izaho androany dia memo naoty ... Izahay dia handamina ny zavatra rehetra ary hangataka an'i Dabin haka ny fizahana farany. LIVE: Ka ... Andro (x9) Bebe kokoa ... eo alohany ... eo amin'ny lafiny fikatohana Tsy mino aho fa mifanentana ... Lowe dia zavatra ... koa "Oh-oh" lasa toy izao ... Fepetra ilaina fotsiny ... "Oh uh" IAN: Mety ho toy ny ... Layer isaky ny sosona. FIAINANA: "Ka tratrako" IAN: Marina, mety, marina. Misy feo afaka manova azy io ve? LIVE: Raketo izany. LIVE & IAN: Enga anie no farany, farany. LIVE: Henoy. IAN: Akory ny feo. IAN: Ahoana no niandohany azy? Fehiny: ambany kokoa izany. IAN: Marina, marina. Izaho ... nefa efa zatra kokoa taminy aho. TSARA: efa zatra an'io aho. Ok ~ IAN: Milalao ny ampahan'ny "HERE ETO TSY MISY AZONAO". Miezaka ny hanao ity hira ity aho toa ny olona 60 nandray anjara. Tsy mora izany. Eny, andao hihaino. FIAINANA: mety tsy maninona azafady Eny Efa tapitra izao. Io hira… mbola misy ilay hira manaraka. Ankehitriny, izao hataoko izao dia ny fahataperan'ny "NEON" Araka ny fantatrao dia manohy ny fitenenana ny tonony hoe "Ny orokao no mahatonga ahy handeha" na "Ny orokao, mampody azy, neon, neon" dia mivoaka Heveriko fa milay izany Ny ampahany amin'ny chorus koa dia mahafinaritra. Nantsoina hoe "Neon" izy io Tsy mino aho fa afaka mahita sy mahatsapa "neon" ny olona. Fantatrao ve ny tiako holazaina? Noho izany Tsy azoko antoka. IAN: Eny ary ... ataoko fa tsara izany. LIVE: Dia avy eo lazao "ianao" aorian'ny "volomparasy, manga, volomparasy, mavokely". IAN: Eny ary. Ataoko fa ampy izay Mino aho fa vita. Ny fifangaroana, ny fanitsiana ary ny fandraisam-peo izay toa tsy hifarana mandrakizay dia tapitra ny farany. Tapitra ny fifangaroana ary tonga ny fotoana mankany amin'ny studio mastering ... FIAINANA: Tompo CREAM: Tsy maninona izany. HAFA goavam-be: Ahoana ny hevitrao momba azy rehetra? Heveriko fa zava-dehibe ny fiafaran'ny "TSY MISY AZONAO." CREAM: Andao hijanona eto ... alohan'ny hivoahan'ny feo Tale Jeneraly: Misedra fotoan-tsarotra aho. TSIA: Tsia, rahalahy. LIVE: ho avy matetika aho. TSARA: tonga milalao ihany koa ny anadahiko. Tale jeneraliny: tsy maintsy mandeha milalao aho ... CREAM: sahirana koa ny rahalahiko ..? [Datin'ny famoahana ny Teaser] Yongwoo: Tena milay. Star Star: Mazava ho azy fa tsia. IAN: Fantatro fa, saingy ... FIAVIANA: nalaiko avy tao Vimeo tao anaty teaser 4k HD. IAN: 4k somary maizina ... ka mba tadidio: ajanony. Milamina. ZAVA-TENA: naka fanafody hafahafa ianao. Ianao naka fanafody antsoina hoe 4k. IAN: Tsia ... Aretina eo amin'ny asa ity ... TSIA: Tsia. Toy ny aretina tsy misy ilana azy izany. IAN: Matokia ahy, matokia ahy. Fantatro fa tsy misy fahasamihafana lehibe ... HIAINANA: 4 minitra 3 minitra sisa. CREAM: Atombohy aminao HIAINA: 2 minitra Vonona ve izao tontolo izao? Vonona ve izao tontolo izao? Tsy ataoko fa efa vonona aho Oh! Nakako izany !!! CREAM & Silver Star: nampidirinao ity? IAN: Tongasoa eto amin'ny fizarana faha-101 nataoko. Io ilay studio trano kely ananako. Tiako ny manova ny tranoko. Satria mampionona ahy Satria misy io Lori: I ... Azafady tompoko ... Ankehitriny, manova ny "LEGACY" aho. Ary io no ho voalohany famoahana horonantsary mozika. Ny fanovana dia ho 60-70% amin'ny drafitra nataoko Ny sisa dia mikasa, hitifitra ... Tsara feo. Noho izany dia tena ilaina io vidéo io. Satria ity horonantsary ity dia midika fa efa tonga tao anatin'izao rehetra izao vaovao i Da Vin. Tamin'izay no resaka. Ilay rakitsary "ISY ANYBODY IZAO" dia lalan'ny "DPR universe" vaovao izay ataontsika ankehitriny. Vao manomboka fotsiny izany. Toroan'ny iceberg Toy ny milalao lalao izany. Heveriko fa tokony apetratsika ao ny lelafo kely. Raha esorinao ny voasary ... Ny tavako dia nanjavona ... Rehefa avy nandinika sy nanova ny lahatsary farany Nanao ekipa mozika voalohany sy fizarana fihainoana rakikira niaraka tamin'ireo mpiara-miasa namorona ny ekipa. - @iiseseoul TSINY: andao xx KK: DAMN ZAVA: Iza no manao izany? TK & KK: havanana (x3) KK: Rom (IAN) xx Marary aho, xx FIAINANA: Faly aho satria izany no fihetsiko. KK: Tsy ho fantatry ny mpankafy fotsiny. Tsy fantatro izay hitranga. Tena misy marina Tsy misy tsy ampy. TK: Marina, raha mijery tetikasa hafa aho, raha tsara ny mozika, somary tsy dia mandeha ho azy ilay video. Misy ny tsy fahampiana. ZAVATRA: rohy malemy KK: Raha ny marina, tsy afaka mieritreritra na inona na inona aho (ekipa toa anao) Izany no adala. Daty famoahana Album HIAINA: 37 minitra Somary mitebiteby aho. ZAVA-TENA: matahotra kokoa noho izahay ianao! FIAINANA: Tena mahatsapa izany fahatsapana izany ... Mihozongozona kokoa noho ny sakaizako voalohany izy io Adala ve ianao? Vonona ve ianao? Tsy ataoko fa efa vonona aho. IAN: Ahoana ny fihetsik'izany? Inona ny fanehoan-kevitra? LIVE: Mamaky, mamaky, mamaky etsy ambony. Guhyo (Drummer): 10 minitra TSARA: Vonona daholo! LIVE: Ry Andriamanitro TSINY: heveriko fa feno lanitra aho. FIAINANA: Izany no tsapany. Harim (bass): Oh! Minitra iray sisa! Ah! Tonga ny mivoaka!
&quot;LIFT-OFF&quot; | TOKO FANAO? fanadihadiana
< start="2.06" dur="3.94"> Talohan'ny nanombohan'ity horonantsary ity dia nanomboka ny tetikasa izy ireo taoriana kelin'ny 2018 World Tour. >
< start="6" dur="6"> Rehefa niroso soa aman-tsara ny fizahantany dia nanomboka nahazo aingam-panahy avy tamin'ny tetikasa vaovao ny DPR. -Rosiana mila drafitra tsy tambo isaina, fifantohana, fiaraha-miasa sy ny finiavana. >
< start="12" dur="6"> Ity horonantsary ity dia "MOA IZANY ARY IZANY?" Ity horonantsary ity dia nalaina telo volana talohan'ny famoahana azy ary tafiditra ao anatin'ny tetikasa iray manontolo. >
< start="18" dur="6.4"> Ny seho ao amin'ity fanadihadiana ity dia mampiseho ny fizotran'ny asa isan'andro amin'ny ambaratonga farany amin'ny tetikasa. -Ny horonantsary fandraketana an-tsoratra, fivoriana video, resaka mifampiresaka. >
< start="24.42" dur="6.6"> Ahitana ny lafin-javatra tsy mahazatra sy matotra DPR, marika fialamboly mahaleo tena ary vondrona sakaiza manana nofinofin'izy ireo manokana. >
< start="40.02" dur="1"> DPR IAN: Manahoana? >
< start="41.82" dur="1.08"> Manao ahoana ianao? >
< start="44.3" dur="1.2"> Ka ... >
< start="45.5" dur="10.7"> Raha zohina dia nieritreritra aho hoe hanao ahoana ny an'i John mba handrakitra ny fizotran'ity album ity ... >
< start="56.68" dur="2.32"> Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany >
< start="59" dur="2.08"> Eh ... noheveriko ho mangatsiatsiaka ihany. >
< start="61.92" dur="2.86"> Mba hampisehoana ny olona ny zavatra mihetsika ao ambadiky ny sehatra. >
< start="64.78" dur="2.62"> Araka ny fantatrao, izay tsy nasehon'ny DPR. >
< start="67.52" dur="1.96"> Ary mampiseho antsika ny habetsahan'ny azontsika niditra tao. >
< start="70.38" dur="2.04"> Eny, lazao amiko ny hevitrao. >
< start="73.08" dur="2.08"> Eny ary, tsara daholo… Salama. >
< start="75.88" dur="2"> 3 volana mialoha ny famoahana rakikira >
< start="90.88" dur="3.42"> DPR LIVE: Eny, rehefa mandre izany ny olona dia hahatsapa zavatra iray. >
< start="94.3" dur="0.96"> IAN: Ie. >
< start="95.84" dur="3.28"> FIAINANA: Manantena aho fa ho gaga amin'ny tsy ampoizina ianao. Raha mihaino ity hira ity ianao. >
< start="99.44" dur="1.84"> Avy amin'ny "HIA EFA TSY HITA" ka "GERONIMO" >
< start="101.66" dur="3.66"> LIVE: Henoko fotsiny hoe, "Oh, tsy izany no nantenako." >
< start="105.32" dur="0.58"> IAN: Ie, eny. >
< start="106.08" dur="2.28"> FIAINANA: "Fa maninona no hifindra ianao?" >
< start="109.46" dur="1.16"> DPR REM: mitohy fotsiny. >
< start="113.3" dur="1.9"> Mampihena ny feo fiaramanidina >
< start="115.2" dur="1.18"> Raha manelingelina fiantraikany hafa na feon-javatra eo anelanelan'ny ianao >
< start="116.38" dur="1.66"> LIVE: * Effect Sound * ny Mayday >
< start="118.04" dur="1.12"> ZAVA-TENA: toa tsy misy dikany izany. >
< start="119.98" dur="4.22"> Amin'izay, tsy mila misafidy ny fomba mazava ianao. >
< start="124.7" dur="2.38"> Ary voajanahary azonao afindra amin'ny manaraka. >
< start="127.1" dur="5.1"> Ka na dia mijery azy ankehitriny aza isika, rehefa miaraka isika, >
< start="132.22" dur="2.6"> Na, toy ny bitika kely "hyper loop" >
< start="134.82" dur="2.62"> Misy fotoana izay anaovanao zavatra toy ny "zoom" toy ny Star Wars. >
< start="137.44" dur="3.42"> Raha afaka ataonao fihodinana kely ireo LED ireo >
< start="140.86" dur="2.96"> IAN: Jereo avy ao ivoho ary jereo avy eo aloha >
< start="144.02" dur="4.18"> Mieritreritra aho fa mahafinaritra raha iny no nivoitra kely kokoa. >
< start="148.2" dur="2.62"> Izany fotsiny ny filako. >
< start="151.46" dur="4.08"> Zavatra iray ... tsara tarehy be ny metaly. >
< start="155.54" dur="1.7"> Ka manana ny efitrano farany ianao. >
< start="157.24" dur="3"> Noho izany, i Davin dia hijoro eo anoloan'ilay fakantsary. >
< start="160.38" dur="3.16"> Ary hoy ianao: “Aza maka olona maditra. Ataovy hatrany izao, mba hahafahako manao ahy. ” >
< start="163.68" dur="2"> Ary misokatra ny varavarana ary mitsambikina ianao. >
< start="165.68" dur="0.92"> ZAVA-POANA: Tonga ve ny tifitra "NEON" iray? >
< start="167.1" dur="2"> IAN: Eny, hitifitra azy io indray mandeha aho. >
< start="169.1" dur="1.62"> Azonao atao avokoa ny miaraka aminy ... >
< start="171.22" dur="1.08"> Hainao, afaka manao zavatra maro ianao ... >
< start="172.32" dur="1.26"> Mety ho zavatra tokony hieritreretako izany. >
< start="173.58" dur="2.98"> ZAVA-TENA: Avy eo >
< start="176.56" dur="1.36"> Mihodina ny ... Sahala amin'izany >
< start="179.44" dur="1.48"> Ahoana no handraisana azy io izao >
< start="180.92" dur="1.86"> Ny maha-zava-dehibe ny fandresenao eto dia zava-dehibe. >
< start="183.28" dur="1.58"> Ao amin'ity andiany ity. >
< start="184.86" dur="2"> AZONAO: Nahazo drafitra CD fonosana tena tsara aho. >
< start="187.08" dur="1.54"> IAN: Oh? Efa niverenanao azy ve io? >
< start="188.62" dur="0.74"> Fehiny: nataoko taminay (mpanakanto endrika CD). >
< start="189.36" dur="2.54"> Famonosana habaka >
< start="193" dur="1.9"> IAN: Eh milay. Amin'ny ambaratonga manaraka. >
< start="194.9" dur="1.4"> TSARA: Tsy ity ve ny ambaratonga manaraka? >
< start="197.34" dur="1.18"> IAN: Tsy nieritreritra an'izany aho. >
< start="198.52" dur="1.4"> TSINY: Fantatrao ve ny mahasalama an'io? >
< start="216.36" dur="1.74"> TSARA: Andao hihaino tsirairay isika. >
< start="246.68" dur="2.38"> CREAM: Mila mikitika ny lamosina ianao. >
< start="249.06" dur="2.66"> FIAINANA: Eny, tsy maintsy mahatsapa fahatsapana «milomano» ianao amin'ny fitarihana azy. >
< start="261.6" dur="1.96"> ZAVA-FOTANA: Ny lojika >
< start="263.94" dur="2.04"> Hanao video roa na roa ve ianao >
< start="266.9" dur="2.62"> Hanampy anao bebe kokoa ve ... Izany no izy ... >
< start="273.86" dur="2.22"> LIVE: Eny, eny ... mampalahelo ihany izany >
< start="276.26" dur="2.6"> Izany fotsiny, ny zavatra rehetra noeritreretinay ... >
< start="279.7" dur="0.84"> IAN: Marina, marina. >
< start="280.54" dur="2.62"> FIAINANA: Tsy mino aho fa ho fantatry ny olona eto amin'izao tontolo izao. >
< start="285.18" dur="1.04"> IAN: Voabahana izao aho izao. >
< start="288.88" dur="1.38"> Sarotra loatra izany ... >
< start="292.72" dur="2.92"> Misy zavatra sarotra kokoa. >
< start="298.1" dur="2.8"> Izay hataontsika ankehitriny dia ny fampiasana ireo singa ananantsika >
< start="300.9" dur="2.78"> Azoko sary an-tsaina tsara ny tantara. >
< start="306.36" dur="3.2"> Raha tokony ho izy kosa, raha ny lalana halehanay >
< start="309.56" dur="4.02"> Hiova ny lalana arahin'izay tohizantsika ankehitriny. >
< start="314.08" dur="3.7"> Izany no antony nahafoizanay izany, ity, ireto >
< start="318.2" dur="2.4"> Betsaka loatra ny olana. >
< start="320.6" dur="2.54"> TSARA: Fafa hafa noho ny nanantena aho. >
< start="323.34" dur="0.96"> Tsy tapitra ny fotoana nandehan'i Davin >
< start="324.3" dur="1.04"> Tany Roma, ny endrika napetraka dia hafa noho ny nieritreretiko. >
< start="325.34" dur="2.5"> Just ... ny zava-drehetra ... na dia ny fitafiana. >
< start="328.22" dur="2.32"> Nanao izay fara herinay izahay, saingy tsy natao izany. >
< start="330.96" dur="2.6"> Tsy tokony ho sasatra ianao eto. Izaho fotsiny dia… mila mahay miaina indray. >
< start="338.06" dur="1.26"> LIVE: Mahamenatra? >
< start="341.04" dur="1"> IAN: Tsia, tsara izany talohan'izay. >
< start="342.46" dur="1.24"> Saingy tsy fantatro ny antony nanovako an'izany. >
< start="344.46" dur="3.02"> Ny antony iray mahatonga izany somary hafahafa ihany dia noho ny tononkira. >
< start="347.48" dur="2.38"> "Uh, mahazo ny kofehy, mahazo lows" >
< start="350.4" dur="2"> Noho izany, ny CREAM dia hanao izany bebe kokoa. >
< start="353.1" dur="1.52"> Tsara izany feo izany, nokapohina >
< start="355.18" dur="2.12"> Ho voajanahary amin'ny ampahany amin'ny piano. >
< start="357.3" dur="1.22"> CREAM: Andao aloha hanao zavatra voalohany. >
< start="358.52" dur="1.18"> LIVE: Ataovy fotsiny, aloha. >
< start="379.06" dur="0.68"> LIVE: Lova >
< start="379.74" dur="1.02"> Afaka mitafy an'io fotsiny ianao. >
< start="382.58" dur="1.9"> Amin'ny feo mahery >
< start="390.58" dur="0.9"> Ah, azafady! >
< start="391.8" dur="1.68"> IAN: Eny, kely kokoa izany >
< start="393.98" dur="1.1"> Tsy maintsy mahatsapa ianao. >
< start="418.6" dur="2.46"> 2 volana mialoha ny famoahana rakikira >
< start="426.64" dur="0.88"> Fehiny: Orange >
< start="427.78" dur="1.78"> Eunbyeol (stylist): volomboasary ve izany? Tsy mbola nataoko ny voasary. >
< start="430.98" dur="0.76"> Tokony ho voasary izany. >
< start="431.74" dur="2.08"> TSINY: tsara izany sy ny voasary >
< start="433.82" dur="1.74"> Miandry, nanao ny mari-pahaizana ve izany? >
< start="437.44" dur="1.38"> Tian'ny olona rehetra izany. >
< start="439.16" dur="0.98"> Jeong Geun (stylist): tsy afaka miala amin'ny tanako aho. >
< start="440.14" dur="2.22"> TSARA: Voalohany, misy masika roa ihany i Jun Yong (Stylist Ashe): Tsy mety izany >
< start="442.36" dur="0.88"> Fehiny: Ahoana ny fomba fanao? >
< start="443.24" dur="4.54"> Eunbyeol: Tsy ho tsara tarehy kokoa ve raha toa ka misy mason-tava eo akaikiny? >
< start="450.06" dur="2.74"> Azonao ampiarahina eto ity >
< start="453.38" dur="1.92"> Mila kofehy toy izany aho >
< start="455.76" dur="1.5"> TSINY: fantatro ny tiako ambara. >
< start="457.96" dur="1.46"> IAN: Efa nieritreritra aho, raha >
< start="459.42" dur="3.22"> Raha manana bandana na bandana mainty i Dabin. >
< start="462.64" dur="2.2"> Ka afakory ny sisiko. Fehiny: Azo inoana >
< start="464.84" dur="0.86"> Tiako izany feo izany. >
< start="478.92" dur="2.74"> Eunbyeol: Tsy maninona raha manala an'i Davin >
< start="482.04" dur="0.58"> LIVE: Tapitra? >
< start="482.62" dur="0.84"> Kintan'ny volafotsy: Tsara e! >
< start="485.04" dur="2.24"> IAN: Ahoana no atao? Afaka mandeha ve ianao? Afaka mifindra ve ianao? >
< start="487.78" dur="1.76"> LIVE: Eny, mahazo aina. >
< start="489.92" dur="2.26"> IAN: Hifamatotra amin'ny kitaponao izany. >
< start="492.18" dur="0.58"> LIVE: Eny. >
< start="494.34" dur="1"> IAN: Tsy mety ihany. >
< start="496.28" dur="3.46"> Na dia eo aza ny ezaka lehibe nataon'ny DPR ho an'ireo rakitsary ity, >
< start="499.74" dur="3.16"> Tsy feno ny làlana marobe sy ireo demo maro tsy mbola nahavita. >
< start="502.9" dur="3.48"> Rehefa manakaiky ny fe-potoana, manandrana mafy mamorona isika >
< start="506.38" dur="2.96"> Nangataka fitsangatsanganana fohy i Live ary nandeha nihira tamin'ny toerana vaovao, lavitra ny tanàna. >
< start="510.26" dur="2.3"> FIAINANA: Mino aho fa ho malefaka ny hiova ... People >
< start="512.56" dur="2.26"> Ohatra, "Ow, Rap" >
< start="533.64" dur="2"> CREAM: Oh, mahazo aina aho. >
< start="535.64" dur="0.9"> Tsara izany >
< start="551.4" dur="1.28"> LIVE: miasa mafy ... >
< start="552.68" dur="1.04"> Mihinàna mahasalama! >
< start="588.64" dur="3"> Talen'ny ekipa stunt: Raha mahazo ny fahatsapana ianao, rehefa mitifitra isika izao >
< start="591.64" dur="1.5"> Mba hampifanaraka ny fikirana fakantsary >
< start="593.14" dur="1.76"> Rehefa manao fanovana kely eo >
< start="594.9" dur="0.74"> Mihevitra aho fa azonao atao ny manao izany. >
< start="595.64" dur="1.14"> LIVE: Eny. Hitako izany. >
< start="611.22" dur="0.86"> Ninja sokatra ... >
< start="613.4" dur="0.9"> Tsara ~ >
< start="616.06" dur="0.86"> FIAINANA: "mety" >
< start="619.42" dur="1.94"> [Ny andro talohan'ny famoahana horonantsary] >
< start="631" dur="1.52"> IAN: Mijere eo. >
< start="640.8" dur="2.6"> Mety tsy hivoaka tao ve izany? Tsara kokoa ny hamoaka azy rehetra? >
< start="644.52" dur="1.68"> Amin'ny tranga toa izany? >
< start="668.54" dur="1.36"> Hmm, tsy maninona, tsy maninona e! >
< start="674.12" dur="1.88"> [Andro fifampitifirana sarimihetsika] >
< start="676.5" dur="1.52"> TSARA: Tokony haka izany koa aho? >
< start="678.02" dur="1.08"> JunYong: Eny tokoa. Izany koa >
< start="683.14" dur="2.2"> CLINE: Izaho? Nijanona kely aho rehefa nijanona teo amin'ny zaridainako. >
< start="686.56" dur="1.38"> Yongwoo (Manager): Eh, nanao asa tsara ianao… >
< start="687.94" dur="0.72"> CLINE: Tsy fiantsenana, tetezana ... >
< start="689.14" dur="0.9"> IAN: Andao ... >
< start="690.92" dur="1.02"> Andao ... >
< start="718.7" dur="3.86"> Hoin (Tale): Ataovy izany ... Tany ... Ny loko fotsy ve izao? >
< start="729.14" dur="1.64"> Hoin: Oh, fa ity akanjo "LEGACY" ity ve? LIVE: Oh, ity no rap rap? >
< start="731.28" dur="1.58"> IAN: Ie. Hanomboka toy izao izy amin'ny voalohany. >
< start="732.86" dur="1.46"> OK, eritrereto hoe "NEON" ity. >
< start="734.32" dur="3.38"> Fa ny "LEGACY" dia manomboka amin'ny sehatra mitovy ihany, fa eo amin'ny Mars ianao amin'izao fotoana izao. >
< start="756.62" dur="3.22"> JunYong: Vao lasa aho. Esory izany >
< start="759.84" dur="1.64"> ZAVATRA: Tsy manazava izany. >
< start="761.48" dur="1.3"> Mieritreritra aho fa noho ny hatsembohana. >
< start="771" dur="0.88"> Tale Mpanampy: Tsy sempotra ve ianao? >
< start="783.32" dur="0.88"> IAN: Tsy maninona izany. >
< start="785.82" dur="1.2"> Mpamily drôna (Kim Min-chan) nandroaka ve ianao? >
< start="787.02" dur="1.12"> Mod: mitsiky! >
< start="791.26" dur="0.72"> LIVE: Eny ary. >
< start="791.98" dur="1.16"> IAN: hianjera eo an-tananao io. >
< start="793.86" dur="0.92"> Fantatrao ve ianao? >
< start="794.78" dur="1.32"> Avy eo, rehefa lavo, dia tratranao. >
< start="804" dur="0.96"> FIAINANA: Andao hataontsika indray mandeha indray. >
< start="804.96" dur="0.74"> IAN: Te hanao azy indray mandeha ve ianao? >
< start="806.18" dur="1.28"> Manohina ny bokotra ianao >
< start="808.14" dur="1.2"> Ny haavony >
< start="809.34" dur="1.36"> Tena mitondra azy io ianao. >
< start="829.76" dur="2.7"> Yongwoo: Dabin, mila miakatra any ianao. >
< start="832.62" dur="1.26"> TSARA: Andro 2 IAN: Andro 2 >
< start="836.48" dur="2.42"> Toa ao amin'ny trano fijerena sarimihetsika aho. >
< start="839.36" dur="2.06"> Tena io no ataontsika. >
< start="842.48" dur="2.28"> Azo antoka >
< start="844.76" dur="3.46"> Ny «Space Odyssey» sy ny «Star Wars» dia voataona be. >
< start="848.76" dur="2.22"> Ny zavatra rehetra hitako raha nihalehibe >
< start="852.2" dur="1.98"> Ankehitriny, handeha izahay… Geronimo >
< start="854.66" dur="0.6"> Hetsika ... ! >
< start="867.36" dur="1.14"> Miaraka amin'ny fakan-tsary eo anoloana, ohatra ... >
< start="869.46" dur="1.24"> Tsy mahafinaritra ve izany? >
< start="875.06" dur="1.48"> Misy zavatra toa izany. >
< start="879.36" dur="2"> Afaka mody ho toy ny fefy ianao >
< start="882.66" dur="1.76"> Miaraka amin'ny angovo ... Mahafinaritra. >
< start="893.28" dur="0.74"> Handeha aho! >
< start="904.06" dur="0.86"> TSINY: Izany izany, izay! >
< start="905.6" dur="1.12"> Aleo ary! Izay izany! >
< start="911.04" dur="0.82"> IAN: Mitsangàna ... >
< start="912.86" dur="1.06"> Hijery ny lafiny aho. >
< start="915.56" dur="0.64"> LIVE: Eny ary. >
< start="958.22" dur="0.96"> IAN: Eny ary, izay daholo. >
< start="960" dur="0.98"> Tapitra, rahalahy. >
< start="961.62" dur="1.2"> Ie tapitra! >
< start="962.82" dur="1"> Tale mpanampy: asa tsara! >
< start="963.82" dur="2.46"> Tsara ny asanao! >
< start="968.58" dur="2.44"> 1 volana mialoha ny famoahana rakikira >
< start="971.76" dur="2.72"> [Mampifangaro Studio] TORO: Mila sorona ny andaniny roa. >
< start="974.88" dur="2.22"> Tsy mino aho fa tokony handeha lavitra amin'ny zavakanto ihany isika. >
< start="977.1" dur="3.6"> Ohatra, "Oh, tokony ahena kely kokoa ity decibel ity ..." >
< start="980.7" dur="1.52"> Sahala amin'izany >
< start="982.22" dur="1.32"> Eny, afaka manao izany indray mandeha aho. >
< start="983.54" dur="1.6"> Saingy tsy hiverina isika. >
< start="985.14" dur="2.24"> Satria rehefa mitranga izany dia mihemotra ny zava-drehetra. >
< start="987.78" dur="2.24"> IAN: Fa ity ... >
< start="991.82" dur="1.58"> TSINY: Raha tara isika >
< start="994.12" dur="4.66"> Saingy azoko antoka fa 100 isanjato izany, 99 isan-jato ny farany. >
< start="1004.76" dur="2.16"> Lazao amin'ny olona izay mijery azy >
< start="1008.44" dur="2.66"> Tena manakaiky isika. >
< start="1011.5" dur="2.1"> Ary ho an'ny rehetra eo amin'ny anjara asako >
< start="1015.02" dur="2.96"> Ity no zavatra mampiady saina indrindra. >
< start="1018.72" dur="2.02"> Koa eto daholo izahay >
< start="1022.02" dur="2.64"> Izahay dia mifampamaha >
< start="1024.66" dur="4.14"> Handeha hanangona an'ity rehetra ity aho mba hahafahako mandefa ny kopia farany amin'ny fanatrarana ... >
< start="1031.14" dur="2.42"> Somary adin-tsaina aho izao. >
< start="1050.14" dur="2"> Director String: Manodidina ny 93 ary handika any aoriana. >
< start="1052.14" dur="3.82"> Mino aho fa hanao toy izany koa i Tremolo taty aoriana. >
< start="1066.18" dur="6.52"> Rehefa avy nandrakitra ireo tadin-dàlana misy an-dàlan'ny "KISS ME" sy ny "TSY MANGALATRA AZONY", dia nanomboka nifangaro ny ekipa, iray amin'ireo ampahany lehibe indrindra amin'ny fizotran'ny mozika. >
< start="1072.7" dur="6.06"> Saingy noho ny fanelingelenana sy fotoana farany, ny DPR dia tsy maintsy namorona momba ny fomba fampiasan'izy ireo ny fotoana sisa tavela. >
< start="1081.12" dur="5.6"> TSAROTRA: Ny fifangaroana rehetra nalefako (Engine Engineer) ary izaho androany dia memo naoty ... >
< start="1087.32" dur="5.06"> Izahay dia handamina ny zavatra rehetra ary hangataka an'i Dabin haka ny fizahana farany. >
< start="1092.38" dur="3.76"> LIVE: Ka ... Andro (x9) >
< start="1101.14" dur="2.6"> Bebe kokoa ... eo alohany ... eo amin'ny lafiny fikatohana >
< start="1105.14" dur="2.92"> Tsy mino aho fa mifanentana ... >
< start="1108.24" dur="2"> Lowe dia zavatra ... koa >
< start="1110.24" dur="2.36"> "Oh-oh" lasa toy izao ... >
< start="1112.6" dur="3.1"> Fepetra ilaina fotsiny ... "Oh uh" >
< start="1126.58" dur="1.24"> IAN: Mety ho toy ny ... >
< start="1129.22" dur="1.2"> Layer isaky ny sosona. >
< start="1153.68" dur="0.92"> FIAINANA: "Ka tratrako" >
< start="1154.6" dur="1"> IAN: Marina, mety, marina. >
< start="1156.7" dur="4.14"> Misy feo afaka manova azy io ve? >
< start="1164.46" dur="1.16"> LIVE: Raketo izany. >
< start="1170.42" dur="2.42"> LIVE & IAN: Enga anie no farany, farany. >
< start="1172.84" dur="1.32"> LIVE: Henoy. >
< start="1174.16" dur="2"> IAN: Akory ny feo. >
< start="1187.76" dur="1.26"> IAN: Ahoana no niandohany azy? >
< start="1191.34" dur="1.7"> Fehiny: ambany kokoa izany. IAN: Marina, marina. >
< start="1193.04" dur="2.7"> Izaho ... nefa efa zatra kokoa taminy aho. >
< start="1196.4" dur="1.24"> TSARA: efa zatra an'io aho. >
< start="1204.46" dur="5.36"> IAN: Milalao ny ampahan'ny "HERE ETO TSY MISY AZONAO". >
< start="1209.82" dur="5.22"> Miezaka ny hanao ity hira ity aho toa ny olona 60 nandray anjara. >
< start="1215.04" dur="2.74"> Tsy mora izany. Eny, andao hihaino. >
< start="1217.78" dur="1.82"> FIAINANA: mety tsy maninona azafady >
< start="1234.44" dur="1.12"> Eny >
< start="1235.56" dur="1.16"> Efa tapitra izao. >
< start="1237.5" dur="2.68"> Io hira… mbola misy ilay hira manaraka. >
< start="1256.74" dur="2.58"> Ankehitriny, izao hataoko izao dia ny fahataperan'ny "NEON" >
< start="1261.16" dur="2.54"> Araka ny fantatrao dia manohy ny fitenenana ny tonony hoe "Ny orokao no mahatonga ahy handeha" na >
< start="1263.7" dur="2.82"> "Ny orokao, mampody azy, neon, neon" dia mivoaka >
< start="1266.52" dur="2.18"> Heveriko fa milay izany >
< start="1268.7" dur="1.74"> Ny ampahany amin'ny chorus koa dia mahafinaritra. >
< start="1270.44" dur="1.54"> Nantsoina hoe "Neon" izy io >
< start="1272.26" dur="3.7"> Tsy mino aho fa afaka mahita sy mahatsapa "neon" ny olona. Fantatrao ve ny tiako holazaina? Noho izany >
< start="1282.12" dur="0.86"> Tsy azoko antoka. >
< start="1282.98" dur="1.26"> IAN: Eny ary ... ataoko fa tsara izany. >
< start="1284.24" dur="3.42"> LIVE: Dia avy eo lazao "ianao" aorian'ny "volomparasy, manga, volomparasy, mavokely". >
< start="1287.66" dur="0.56"> IAN: Eny ary. >
< start="1288.22" dur="2.16"> Ataoko fa ampy izay >
< start="1290.38" dur="1.6"> Mino aho fa vita. >
< start="1291.98" dur="3.44"> Ny fifangaroana, ny fanitsiana ary ny fandraisam-peo izay toa tsy hifarana mandrakizay dia tapitra ny farany. >
< start="1295.42" dur="3.64"> Tapitra ny fifangaroana ary tonga ny fotoana mankany amin'ny studio mastering ... >
< start="1300.38" dur="1.22"> FIAINANA: Tompo >
< start="1314.12" dur="1.24"> CREAM: Tsy maninona izany. HAFA goavam-be: Ahoana ny hevitrao momba azy rehetra? >
< start="1320.52" dur="3.72"> Heveriko fa zava-dehibe ny fiafaran'ny "TSY MISY AZONAO." >
< start="1324.84" dur="1.84"> CREAM: Andao hijanona eto ... alohan'ny hivoahan'ny feo >
< start="1333.4" dur="1.04"> Tale Jeneraly: Misedra fotoan-tsarotra aho. >
< start="1334.44" dur="1.16"> TSIA: Tsia, rahalahy. >
< start="1336.86" dur="1.06"> LIVE: ho avy matetika aho. >
< start="1338.4" dur="1.7"> TSARA: tonga milalao ihany koa ny anadahiko. >
< start="1340.1" dur="1.64"> Tale jeneraliny: tsy maintsy mandeha milalao aho ... >
< start="1341.74" dur="1.1"> CREAM: sahirana koa ny rahalahiko ..? >
< start="1344.04" dur="1.08"> [Datin'ny famoahana ny Teaser] Yongwoo: Tena milay. >
< start="1345.12" dur="0.74"> Star Star: Mazava ho azy fa tsia. >
< start="1347.14" dur="2.68"> IAN: Fantatro fa, saingy ... FIAVIANA: nalaiko avy tao Vimeo tao anaty teaser 4k HD. >
< start="1349.82" dur="2.68"> IAN: 4k somary maizina ... ka mba tadidio: ajanony. Milamina. >
< start="1352.5" dur="2.46"> ZAVA-TENA: naka fanafody hafahafa ianao. >
< start="1354.96" dur="2.92"> Ianao naka fanafody antsoina hoe 4k. IAN: Tsia ... Aretina eo amin'ny asa ity ... >
< start="1357.88" dur="2.66"> TSIA: Tsia. Toy ny aretina tsy misy ilana azy izany. >
< start="1360.54" dur="1"> IAN: Matokia ahy, matokia ahy. >
< start="1361.94" dur="1.94"> Fantatro fa tsy misy fahasamihafana lehibe ... >
< start="1364.08" dur="1.02"> HIAINANA: 4 minitra >
< start="1368.9" dur="1.24"> 3 minitra sisa. >
< start="1371.26" dur="1.36"> CREAM: Atombohy aminao >
< start="1373.68" dur="1.08"> HIAINA: 2 minitra >
< start="1374.76" dur="1.3"> Vonona ve izao tontolo izao? >
< start="1377.1" dur="1.04"> Vonona ve izao tontolo izao? >
< start="1378.14" dur="1.22"> Tsy ataoko fa efa vonona aho >
< start="1379.88" dur="0.62"> Oh! Nakako izany !!! >
< start="1382.48" dur="0.88"> CREAM & Silver Star: nampidirinao ity? >
< start="1400.32" dur="5.88"> IAN: Tongasoa eto amin'ny fizarana faha-101 nataoko. >
< start="1406.2" dur="2.62"> Io ilay studio trano kely ananako. >
< start="1408.82" dur="2.1"> Tiako ny manova ny tranoko. >
< start="1410.92" dur="0.9"> Satria mampionona ahy >
< start="1411.82" dur="2"> Satria misy io >
< start="1415.38" dur="1.52"> Lori: I ... Azafady tompoko ... >
< start="1417.26" dur="2.84"> Ankehitriny, manova ny "LEGACY" aho. >
< start="1420.1" dur="2.54"> Ary io no ho voalohany famoahana horonantsary mozika. >
< start="1422.64" dur="10.46"> Ny fanovana dia ho 60-70% amin'ny drafitra nataoko >
< start="1433.1" dur="4.98"> Ny sisa dia mikasa, hitifitra ... >
< start="1440.26" dur="1.28"> Tsara feo. >
< start="1441.54" dur="2.7"> Noho izany dia tena ilaina io vidéo io. >
< start="1444.24" dur="4.42"> Satria ity horonantsary ity dia midika fa efa tonga tao anatin'izao rehetra izao vaovao i Da Vin. >
< start="1448.66" dur="0.84"> Tamin'izay no resaka. >
< start="1449.5" dur="10.06"> Ilay rakitsary "ISY ANYBODY IZAO" dia lalan'ny "DPR universe" vaovao izay ataontsika ankehitriny. >
< start="1459.56" dur="1.8"> Vao manomboka fotsiny izany. >
< start="1461.36" dur="1.88"> Toroan'ny iceberg >
< start="1465.18" dur="1.4"> Toy ny milalao lalao izany. >
< start="1471.56" dur="2.9"> Heveriko fa tokony apetratsika ao ny lelafo kely. >
< start="1474.92" dur="1.64"> Raha esorinao ny voasary ... >
< start="1478.62" dur="2.34"> Ny tavako dia nanjavona ... >
< start="1480.96" dur="2.5"> Rehefa avy nandinika sy nanova ny lahatsary farany >
< start="1483.46" dur="3.38"> Nanao ekipa mozika voalohany sy fizarana fihainoana rakikira niaraka tamin'ireo mpiara-miasa namorona ny ekipa. - @iiseseoul >
< start="1499.48" dur="1.76"> TSINY: andao xx >
< start="1504.9" dur="1.02"> ZAVA: Iza no manao izany? >
< start="1505.92" dur="1.24"> TK & KK: havanana (x3) >
< start="1507.16" dur="1.46"> KK: Rom (IAN) xx Marary aho, xx >
< start="1508.62" dur="1.84"> FIAINANA: Faly aho satria izany no fihetsiko. >
< start="1527.26" dur="2.34"> KK: Tsy ho fantatry ny mpankafy fotsiny. >
< start="1529.6" dur="3.52"> Tsy fantatro izay hitranga. >
< start="1533.12" dur="1.38"> Tena misy marina >
< start="1534.5" dur="2"> Tsy misy tsy ampy. >
< start="1536.5" dur="4.74"> TK: Marina, raha mijery tetikasa hafa aho, raha tsara ny mozika, somary tsy dia mandeha ho azy ilay video. >
< start="1541.24" dur="1.22"> Misy ny tsy fahampiana. >
< start="1542.46" dur="0.92"> ZAVATRA: rohy malemy >
< start="1543.38" dur="3.8"> KK: Raha ny marina, tsy afaka mieritreritra na inona na inona aho (ekipa toa anao) >
< start="1547.18" dur="2.22"> Izany no adala. >
< start="1552.06" dur="1.76"> Daty famoahana Album >
< start="1557.64" dur="1.48"> HIAINA: 37 minitra >
< start="1559.12" dur="1.88"> Somary mitebiteby aho. >
< start="1564.72" dur="3.94"> ZAVA-TENA: matahotra kokoa noho izahay ianao! >
< start="1571.52" dur="2.18"> FIAINANA: Tena mahatsapa izany fahatsapana izany ... >
< start="1573.7" dur="2.02"> Mihozongozona kokoa noho ny sakaizako voalohany izy io >
< start="1575.72" dur="1.48"> Adala ve ianao? >
< start="1577.2" dur="1.84"> Vonona ve ianao? >
< start="1579.06" dur="1.86"> Tsy ataoko fa efa vonona aho. >
< start="1580.92" dur="1.38"> IAN: Ahoana ny fihetsik'izany? Inona ny fanehoan-kevitra? >
< start="1582.3" dur="1.8"> LIVE: Mamaky, mamaky, mamaky etsy ambony. >
< start="1586.2" dur="1.46"> Guhyo (Drummer): 10 minitra >
< start="1589.76" dur="2"> TSARA: Vonona daholo! >
< start="1594.5" dur="1.62"> LIVE: Ry Andriamanitro >
< start="1596.14" dur="2.68"> TSINY: heveriko fa feno lanitra aho. >
< start="1598.82" dur="1.48"> FIAINANA: Izany no tsapany. >
< start="1601.94" dur="1.54"> Harim (bass): Oh! Minitra iray sisa! >
< start="1611.9" dur="1.36"> Ah! Tonga ny mivoaka! >